Pfungwa makumi matatu Eminamato Yekutenda Ino fambisa Makomo | MINYENGETERO MARI
musha Pfungwa dzemunamato Pfungwa makumi matatu Eminamato Yekutenda Ino Fambisa Makomo
Matthew 17:20 Jesu ndokuti kwavari: Nekuda kwekusatenda kwenyu, nekuti zvirokwazvo ndinoti kwamuri: Kana mune rutendo rwakaita setsanga yemasitadha, muti kugomo iri, Ibva pano, enda uko. chinofanira kubviswa. uye hapana chichava chisingakwanisi kwauri.
Faith imari yepasirese iyo inoita kuti iwe utore zvinhu zvenhaka yako muhupenyu. Pasina kutenda hazvigoneke kubudirira muhupenyu, murume wese mukuru uye mukadzi murume nemukadzi wekutenda. Mwari wedu anoshanda munzvimbo dzekutenda, Vaheberi 11: 6 inotiudza kuti kana pasina kutenda hatigone kufadza Mwari, kuti Mwari apindire mukati mehupenyu hwako, unofanira kuve nekutenda maari. Nhasi tichave tichiita nhanho dzekunamatira pakutenda kuno fambisa makomo. Chero chipingamupinyi chakamira pamberi pako chichavhuniwa izvozvi muzita raJesu.
Kune dzakawanda tsananguro dzekutenda nhasi, asi nechinangwa chechinyorwa chino, tichave tichitarisa pakutenda muna Mwari. Kune marudzi maviri okutenda, ndeaya: Kutenda Muna Mwari uye Kutenda Mauri. Unoda vaviri kuti ubudirire, unofanira kuvimba naMwari kuti ubudirire uye zvakare unofanirwa kutenda kuti newewo unogona kubudirira. Asi nhasi tichave tichitarisa pakutenda muna Mwari, kana Mwari rudzi rwekutenda. Kutenda ndiko kuvimbika kwakazara kuna Mwari. Kunyatsovimba naMwari kunongoreva kuti wauya kuzovimba naMwari nehupenyu hwako, zvinoreva kuti kunyangwe zvinhu zvikaipa sei panguva ino, uchakamira naJesu. Rudzi rwokutenda rwunosimudzira makomo kutenda kwakazara. Iko kutenda uko kunoshaya kusava nechokwadi, iko kutenda kusingamboregi kuna Mwari. Kutenda kunoisa makomo kutenda kusingaoni hazviiti. Marako 9:23 inotiudza kuti kana tichigona kutenda, zvinhu zvese zvinogoneka kuna iye unotenda. Chero bedzi kutenda kwedu kuchirimo, hakuna chinhu chichava chisina simba kwatiri. Munamato uyu unonongedzera pakutenda uko kunochinja makomo kunobvisa gomo rega rega rekupokana kubva kuhupenyu hwako muna Jesu
Maitiro Ekubata Nechitendero Ichi
Iwe unogona kubata kutenda kuburikidza neminamato. Munamato ndiyo kiyi yezvinhu zvese zvakanaka muhupenyu. Kana uchishuvira kushanda mukutenda mashura, iwe unofanirwa kunge uri munamato wokunamata, unofanirwa kupihwa minamato. Munamato uyu unonongedzera kukutenda uchave nokukugadza pamwe nemweya wekutenda uyo uchafambisa makomo ega ega echidhimoni muhupenyu hwako muzita raJesu. Ini handizive zvinonetsa iwe zvauri kupfuura nazvino, paunobata pfungwa idzi ndinoona makomo ako ose achisvetuka semakondoh muzita raJesu. Namata uyu minamato nekutenda nhasi uye fambisa makomo ako
1.Mweya Wakachena, usasiye imba yangu riri dongo, muzita raJesu.
2. O, Ishe ,vandudza pfungwa dzangu mushoko renyu.
3.OIshe, ndipeiwo simba rekunyadzisa vavengi vangu.
4. Coffin yega yega yemweya yandakazvigadzirira ini, ndiparadzwe nemoto waMwari, iye zita raJesu.
5. O Ishe Jesu, ndisarudzirei chishamiso mazuva ese ehupenyu hwangu.
6. O Ishe, taurai izwi Renyu remasimba mune yangu mamiriro.
7. Ishe, ndinunurei pamuromo weshumba.
8. O Ishe, ndiregerere nekuunza matambudziko muhupenyu hwangu.
9. O Ishe, ndipei simba rekugara muareka yaNoa.
10. O Ishe, ndipe simba kuti ndibudirire.
11. O Ishe, bvisa kubva muhupenyu hwangu chero chinhu chichaita kuti ndipone kubvutwa.
12. Rega ropa raJesu nemoto weMweya Mutsvene, ucheneswe kubva muhupenyu hwangu, hanzi yega yega inoenda neni kugehena remoto, muzita raJesu.
13. Ishe, ndipe simba kuti ndigare mukuchengeteka.
14. Ini ndinosuka chikafu chega chega chechivi muhupenyu hwangu, muzita raJesu.
15. O Ishe, taura hupenyu nemoto muhupenyu hwangu nhasi.
16. Ini ndinomedza piritsi rekupokana nehasha nekutadza nekusarurama, muzita raJesu.
17. Ishe Jesu, ndinamatirewo kuti ndirege kuzunungurwa sehundi yegorosi naDhiabhori.
18. Ishe, ndibatsirei kubva kumusoro, munyadzise vadzvinyiriri vangu.
19. Ini ndinofamba kubva padiki kusvika pazere kubwinya kwaMwari, muzita raJesu.
20. Ndinoomesa kushorwa kwese kwaSatani kufambira mberi kwangu, muzita raJesu.
21. Hudyu dzangu dzose dzichanyadziswa, muzita raJesu.
22. Ini ndinoparadza mabasa eparadzi pane hupenyu hwangu, muzita raJesu.
23. Muti wese wakashata unokura mune nheyo yangu, usimudzwe ikozvino, muzita raJesu.
24. Ini ndinotyora zai rimwe nerimwe rakaiswa nenyoka mune chero dhipatimendi rehupenyu hwangu, muzita raJesu.
25. Wese wenyoka ne scorpion simba zvinopesana nehupenyu hwangu, nyadziswa, mune zita raJesu.
26. O Ishe, maseraga ese uye nezvinyavada zvakapihwa kwandiri kuti vatange kuzvirwira, muzita raJesu.
27. Nyoka yese yakatumirwa kuzondiparadza, dzoka kune watumira iwe, muzita raJesu.
28. Wese mweya mbeveve nematsi, tanga kusunungura kubatisisa kwako pahupenyu hwangu ikozvino, muzita raJesu.
29. Simba rangu repamweya rakarumwa nenyoka, gamuchira kubata kwehumwari kwaMwari ugodzoserwa, muzita raJesu.
30. Iwe nyoka, sunungura kubatwa kwako pasimba rangu rezveMweya, muzita raJesu
Previous nyaya100 Matipi Emunamato kune Vakadzi
inotevera3Amondo ehondo Yekunamata Mapepa
Okechukwu Augustine chigozie Chivabvu 10, 2020 nenguva dza 11:21 pm
Munamato wangu wekukumbira mangwanani ano ndeyekuti Mwari vandidzikunure kubva kune zvese zvinhu zvandiri kupfuura nemamiriro ezvinhu andiri asiri kuita kuti ndifare ndinoda shanduko muhupenyu hwangu ndinoda kuti Mwari vandipe simba rekumunamata iye simba rekudzidzisa shoko raMwari simba rekuita kuti zvinhu zvichinje muhupenyu hwangu ndinoda kuti Mwari vachinje mamiriro angu ave akanaka mamiriro emari uye zvese kuti zviuye muHupenyu Hwangu ndisati ndapera kwemwedzi uno ndinoda shanduko yehupenyu hwangu regai mweya waMwari tungamira mubatsiri wangu kuti andiwanire kuRudo Rwangu Tsitsi kuti ruponeso rwangu ruuye kuburikidza muhupenyu hwangu muzita raJesu amen
Lisa Nyamavhuvhu 20, 2020 At 4:10 pm
Ameni. Ndakamira muchibvumirana nemi kuti munamato uyu upindurwe.
Leo Kurume 11, 2021 Pa 4: 36 am
Anonamata Anonamata Anonongedza Kwekudzivirira Pamhuri